Britain oo la filayo in ay ku dhawaaqdo tallaabooyin ka dhan ah Ruushka - BBC News Somali
Britain oo la filayo in ay ku dhawaaqdo tallaabooyin ka dhan ah Ruushka
Lahaanshaha sawirka EPA/ YULIA SKRIPAL/FACEBOOK
Image caption Sergei Skripal iyo gabadhiisa Yulia ayay xaaladdooda caafimaad aad u liidataa kaddib markii lagu sumeeyay sun waxyeela u geysata habdhismeedka dareemaha.
Ra'iisalwasaaraha Britain, Theresa May, ayaa maanta lagu wadaa in ay ku dhawaaqdo tallaabooyin dhawr ah oo ka dhan ah dalka Ruushka, kaddib markii xukuumadda Moscow ay ku guuldareysatay in muddadii loo qabtay ay ku caddeyso sababta loo sumeeyay Sergei Skripal oo ka tirsanaan jiray sirdoonka Ruushka iyo gabadhiisa.
Muddada Britain ay u qabatay Moscow ayaa ku ekayd habeen barkii xalay, ilaa haatanna Moscow wax jawaab ah kama aysan bixin arrintaasi oo aan ka ahayn in ay beenisay ku lug lahaanshaheeda isku dayga lagu doonayay in lagu khaarajiyo Sergei Skripal iyo gabadhiisa Yulia.
Sergei Skripal ayaa ka tirsanaan jiray sirdoonka Ruushka balse wuxuu si hoose ula shaqeyn jiray mukhaabaraadka Britain, waxaana markii dambe magangelyo laga siiyay Britain.
Tallaabooyinka la filaya in Britain ay ku dhawaaqdo ayaa waxaa ka mid ah in dalka laga ceyriyo tiro diblomaasiyiin Ruush ah iyo in xayiraad lagu soo rogo muwaadiniin Ruushka u dhashay oo hantiileyaal ah oo lala xiriirinayo madaxtooyada Kremlin.
Xukuumadda Moscow ayaa sheegtay in ka jawaabi doonto tallaabooyinka Britain ee iyaga ka dhanka ah.